Akụkọ banyere elekere Astronomical Prague | Akụkọ Njem
Lola curiel | | omenala, Prague
Prague bụ isi obodo Czech Republic na ịma mma ya, ikuku anwansi ya na ọdịbendị ọdịbendị ya ahapụghị ndị njem nleta ọ bụla. Ọ bụrụ n’atụmatụ ị ga-aga n’oge adịghị anya, gbalịa ịkọwa ihe ma ọ bụ pere mpe banyere njem ị ga-eso, n’ihi onyinye a sara mbara nke ukwuu nke na ị ga-ahazi ọ dị mma ịhụ ka o kwere mee, n'eziokwu, Ekwadoro m ka ị kpọtụrụ ụfọdụ n'ime ntuziaka anyị ihe ịhụ na prague, ka i wee chọpụta isi ihe ndị dị mkpa na nleta gị. Na ndepụta ahụ, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, a ga-etinye ya obodo Astronomical Elekere, otu n'ime ihe ndị kachasị nnọchi anya ya. Na nke a, anyị ga-ekpughere akụkọ akụkọ gbara gburugburu ọrụ nka a.
1 Igwe Igwe Astronomical na Prague
1.1 Ọnụ ọgụgụ nke elekere Prague
2 Akụkọ banyere elekere Prague
Igwe Igwe Astronomical na Prague
Igwe Igwe Astronomical na Prague enye edi kiet ke otu ọsọn̄urua n̄kpọuto site na Czech Republic. Ọ bụ wuru na 1410 maka nna ukwu onye nche Hanus, ọkwa teknụzụ ya na ọmarịcha ịma mma ya juru ọha mmadụ nke oge ahụ anya ma mee ka a mara ya n'ụwa niile. Nke a magburu onwe ya, na mgbakwunye na ịgwa oge, tụọ ọnwa ọnwa, nwere kalenda dabara adaba ma dịkwa eji ihe onyonyo eserese chọọ ya mma na-agagharị mgbe ọ bụla elekere kụrụ elekere.
Ọnụ ọgụgụ nke elekere Prague
Ọ bụrụ na elekere na-akụ elekere, ndị njem nleta na-agbakọta n’ihu ya iji nwee mmasị n'ihe ngosi ahụ. Window elu nke elekere mepere na ọnụ ọgụgụ nke ndịozi iri na abụọ ahụ na-aga na-ele ha anya dị ka a ga-asị na ha nwere ndụ nke ha.
Enwere anọ ọzọ ọgụgụ nke bụ mgbe 1945. Ndị a sonyeere ngagharị, nke ọ bụla na-anọchi anya ihe atụ:
La Muerte, nke ọkpụkpụ na-anọchi anya ya. Ọ na-adọta ụdọ na-egosi mmalite nke usoro ahụ ma nwee hourglass na-anọchi anya oge anyị nwere ruo oge nyocha.
Otu nwa eze turkish, tinyere ụdọ, nke agụụ mmekọahụ na-anọchi anya ya.
Onye ahia onye Juu nke gosipụtara anyaukwu. O nwere akpa ego ọ na-ama jijiji ma elekere kụrụ elekere.
Ihe-efu, nke nwoke na-ele onwe ya n’enyo ahụ nọchiri anya ya.
Ọzọ ịmata bụ na ọnụ ọgụgụ ndị a niile na-eme otu isi ije, ha niile ewepụ Ọnwụ. Mgbe onye isi ndị Turkey, onye ahịa ndị Juu na ndị efu na-efufe isi ha, ọnwụ nwụrụ, na-ekwusi ike na o nwere okwu ikpeazụ yana na n'agbanyeghị na ha ekwenyeghị, oge ha agwụla.
Akụkọ banyere elekere Prague
Ọgba aghara nke elekere n'oge ahụ mere ka ụmụ amaala Prague dị mpako, ọbụnakwa e nwere ndị mere njem ọtụtụ puku kilomita ịga leta gịnị bụ ihe pụrụ iche n'ụwa.
Dabere na akụkọ mgbe ochie, onye aristocrat, na-akpali mmasị site n'aka ikike Hanus, nyere ha nnukwu ego ka ha mee ụdị nche ahụ maka ya na obodo German. Ndị kansụl dị na Prague hụrụ ọkwa obodo ahụ nwetara site n'inweta ụdị akụkụ ahụ pụrụ iche na ha gbalịrị ime ka o kweta ịnakwere onyinye ahụ. Ma onye nkuzi enyeghi ogwe aka ya ighikota na, otu abali, mgbe o na aru oru na ogbako ya, ndị ikom atọ banyere, ha dọkpụrụ ya gaa n'ọkụ na, iji gbochie ya ịmeghachi elekere ahụ, ha surere n'anya-ya dika ígwè n burningre ere.
Ọnọdụ anụ ahụ na nke uche Hanus na-akawanye njọ, ọ dịghị onye a na-enyo enyo na ọ ga-abụ onye kpatara ọgụ ahụ. Ndị agbata obi na ndị kansụl ahụ n'onwe ha bịara iji anya ha hụ ya, otu ụbọchị, n'otu n'ime nleta ndị ahụ, onye ọrụ ọrụ ya, Jakub Cech, nụrụ ka ndị ndu si kwuputa na ha bụ ndị kpara arụ a.
Onye nkụzi ahụ, n’oké iwe na oke iwe, kpara nkata iji gbanyụọ elekere ma bọọ ọbọ maka ihe e mere ya. Ọ jụrụ ndị kansụl ahụ ka ha nye ha ikike ịga elekere, na-ekwu na ya chọrọ ịnụ igwe ya otu oge ọzọ tupu ya anwụọ. Ha mechara kweta. N’ụbọchị ahụ, Hanus na onye na-amụ ọrụ ya gara elekere na nna ukwu ahụ tinyere aka ya n'ime igwe ahụ, igbupụ ya na si otú ahụ bibie usoro ahụ dị mgbagwoju anya na ya onwe ya kere.
Hanus nwụrụ n'abalị ahụ ma ọ dị ogologo oge ruo mgbe ha nwere ike idozi elekere ahụ. Dabere na akụkọ mgbe ochie, kemgbe ọnwụ nke nna ukwu ahụ, elekere bụrụ ọnụ ma chioma nke Prague dabere na arụmọrụ ya. Ọ bụrụ na elekere ahụ kwụsịrị, ọ ga-eme obodo ọjọọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Prague » Akụkọ banyere Prague Astronomical Clock